प्रविधिको उपहारः निःसन्तानलाई आमाबाबु बनाउँदै ‘वात्सल्य’ - Naya Aawaj
टेस्टट्युव बेबी र आईभीएफ प्रविधि उस्तै भएको डा. आकृति बताउँछिन् । फरक भनेको भ्रूण उत्पादन गर्ने भाँडो मात्रै हो । टेस्टट्युव प्रविधिमा ट्युबमा राखेर भ्रूण बनाइन्छ भने आईभीएफमा ग्लासमा बनाइन्छ । उनका अनुसार सामान्य मानिसले बुझ्नका लागि टेस्टट्युब बेबी भनिएको र मेडिकल भाषामा आईभीएफ अर्थात् इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन भनिएको हो ।
सामान्यतया मानिसको बुझाइ आई यु आई गरेपछि बच्चा जन्मिहाल्छ भन्ने पाइएको डा. आकृति भारती बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘धेरै जना आई यु आई गरेपछि हुन्छ भनेर पटकपटक प्रयास गरिरहेको पाएँ, जुन गलत हो । आई यु आई गर्ने पनि सीमित हुन्छ ।’
उनका अनुसार आई यु आई ३० वर्षभन्दा मुनि उमेरकालाई ६ पटकसम्म र ३५ वर्ष भन्दा माथि उमेरकालाई तीन साइकल मात्रै गराइन्छ । त्यति गर्दा पनि भएन भने हामी आईभीएफ प्रणालीमा जानुपर्छ । तर योभन्दा बढी पटक समेत गरेको पाइएको उनको भनाइ छ । आई यु आईमा १५ देखि २० प्रतिशत मात्रै सफल हुने सम्भावना हुने डा. भारतीले बताइन् ।
यो प्रविधिमा महिलामा हुने डिम्बलाई ठूलो बनाउन हर्मन मेडिसिन दिइन्छ । तीनवटा जति डिम्ब ठूलो भएपछि त्यो डिम्बलाई अल्ट्रासाउन्ड प्रविधिबाट बाहिर निकालेर त्यसको गुणस्तर, अवस्था जाँच गरिन्छ । शुक्रकिटलाई पनि लिएर राम्रो राम्रो शुक्रकिट छानेर कृत्रिम तरिकाले मिलन गराएर बाहिर नै भ्रूण बनाइन्छ । भ्रूण भएपछि पीजीएस (प्रि जस्टिस्नल स्क्रिनिङ) गर्भ रहनु भन्दा अगाडि नै बच्चा राम्रो छ-छैन भनेर त्यसको पनि परीक्षण गरेपछि मात्रै पाठेघरमा लगेर राखिन्छ । भ्रूण आमाको शरीरमा नभई ल्याबमा बन्छ ।
कतिपयले भने बच्चा अहिले नजन्माउने भ्रूण बनाएर मात्रै राख्ने भन्ने चाहन्छन् भने त्यसरी नै तीन अथवा पाँच दिनसम्मको भ्रूण बनाएर फ्रिजमा राखिन्छ । त्यो भ्रूणलाई बढ्न नदिन लिक्विइट नाइट्रोजनमा फ्रिज गरेर राखिएको हुन्छ । त्यसपछि उनीहरूको चाहना अनुसार तीन, पाँच, सात वर्षपछि पाठेघरमा राखेर गर्भधारण गरिन्छ । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कतिपय महिलाले यो उपाय अपनाउने गरेको डा. आकृति बताउँछिन् ।
डा. आकृतिका अनुसार अधिकांश महिलामा ३५ वर्षको उमेरमै डिम्ब उत्पादन कम भइसकेको हुन्छ । यसलाई प्रि मेच्युर ओभरी इन सफिसियन्सी भनिन्छ । महिलालाई उनीहरूको डिम्ब भ्रूण उत्पादनका लागि पर्याप्त भएन भने दाताबाट डिम्ब लिन सकिन्छ । कतिपय पुरुषको शरीरले उत्पादन गर्ने शुक्रकिट कमजोर भएका कारण पनि बच्चा बन्न नसक्ने अवस्था हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा दाताबाट स्वस्थ शुक्रकिट लिएर पनि गर्भाधान गर्न सकिन्छ । नेपालमा आईभीएफका लागि डिम्ब तथा शुक्रकिट दानलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानून नहुँदा समस्या भइरहेको डा. आकृति बताउँछिन् ।